Baraawe : HN :– Gadiid uu la socdeen ciidammo ka tirsanaa kuwa dowladda Soomaaliya iyo AMISOM lagu waramayaa in duhurnimadii maanta lagu weeraray meel dulleedka ah degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha hoose.
Sidda dad goob joogayaal ah sheegeen weerarka ayaa ka dhacay meel ku dhow Kabtan Laas oo u dhaxeysa Baraawe iyo Marka, waxaana gaari uu la socday Taliyaha Guutada 3aad ee ciidanka xooga dalka Jen, Goobaanle lala eegtay qarax miino oo wadada la geliyo.
Taliyaha ayaa la sheegay in aan waxba soo gaarin, hase ahaatee ay jiraan askar waxyeelo ka soo gaartay weerarkaas, kuwaasoo aan si rasmi ah loo ogeyn.
Wararka ayaa intaa ku daraya in mid ka mid ah Gaadiidkii ay la socdeen ciidanka dowladda lagu gubay weerarkaas, markii lala helay qarax miino.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka ka dhacay duleedka Baraawe uu socday ku dhowaad hal saac oo labada dhinac ay isku fara sareen, waxaana la soo sheegayaa inuu jiro qasaarooyin kala duwan, inkastoo aanay wali kala cadeyn.
Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose C/qaadir Siidi ayaa sheegay in weerarkaas uu jiro, hase ahaatee Taliyaha uu ka bad baaday weerarkaas, waxaana uu intaa ku daray in qudhiisa uu saakay ka soo ambabaxay Baraawe.
“Gaari uu watay jeneraal Goobaanle ayaa lagu weeraray meel u dhaxeysa Kabtan Laas iyo Roobow, markii ay ka soo baxeen Baraawe”ayuu yiri C/qaadir Siidii oo intaa ku daray in kolonyada la weeraray ay qeyb ka ahaayeen AMISOM.
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa maalmihii u dambeeyay wadada u galayay Kolonyada ciidan ee aada ama ka soo baxda Baraawe, waxaana meel lagu magacaabo Danaw oo looga leexdo Baraawe iyo Khoryooley ay noqotay meelaha ugu badan ee ay weerarada ka dhacaan.
Al-Shabaab ayaa laga saaray degmada Baraawe horaantii bishii October, halkaasoo ay aheyd saldhigooda ugu weynaa, waxaana Shabaabka ay wadaan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ay la eeganayaan Ciidamada dowladda iyo AMISOM.